အဆီကျစေမယ့် နည်းလမ်း ၆၁ နည်း – Gentleman Magazine
ငယ်ငယ်တုန်းက တော့ နေ့တိုင်း စားပိုးနင့်အောင် စားနေတာတောင် တော်တော်နဲ့ဝမလာတာ၊ ခုအသက်လေးနဲနဲ ရလာတာနဲ့ အစားအသောက်ပုံမှန် ပဲစားသော်လည်း ဝိတ်မနဲ တက်လာနေတာ ၂၅ ကျော်ကျော်ကလူတော်တော်များများ ကြုံတွေ့ဖူးမှာပါ။ ဝိတ်ဘာကြောင့်တက်လာရတာလဲ။ အစားအသောက်ကြောင့်လား၊ အနေအထိုင်ကြောင့်လား။ အဖြေက နှစ်ခုစလုံးပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက အမြဲသွားလာလှုပ်ရှားနေရတော့ ဘယ်လောက်စားစား သိပ်မဝလာပေမယ့် အခုလုပ်ငန်းခွင်ထဲဝင်လာရတော့ ထိုင်နေရတာလဲများ လာသလို လှုပ်ရှားသွားလာရတာ နည်းလာတဲ့ အတွက် အဆီတွေ တက် ဝိတ်တွေတက်လာတာပါ။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ကိုယ်ရဲ့ ခန္တာကုိုယ် က ကိုယ်စားတဲ့ အစားအစာ ရဲ့ ရလဒ်ပါ။ မစားပဲနဲ့တော့ဝ လာစရာအကြောင်းကိုမရှိပါ။ ငယ်ငယ်တုန်းက စားသမျှ ကုို လှုပ်ရှားသွားလာ နေတာကြောင့် အားအင်အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားတာကြောင့် ဝရန်ခက်ခဲပါတယ်။ အသက်ကြီးလာတာနဲ့ အမျှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လှုပ်ရှားမှုနည်းလာ ပြီး အစားအသောက်ကပုံမှန်ဖြစ်နေကာ စားသမျှက စွမ်းအင်အဖြစ်အသုံးမပြုဖြစ်ပဲ ကိုယ်ခန္တာက အဆီအနေနှင့် သိုလှောင်ထားသောကြောင့်ဝလာတာပါ။ ဝနေတာကို နေ့ချင်းညချင်း ပိန်အောင်လုပ်လို့မရနိုင်ပါ။ ဝစေတဲ့ အကျင့်ကို နည်းနည်းစီဖျောက် ကာ အချိန်နည်းနည်းပေးကာမှ ဝိတ်ကျနို်င်မှာပါ။ အောက်မှာတော့လူကို အလွယ်တကူဝိတ်ကျစေမယ့် အချက် ၆၁ ချက်ကိုဖော်ပြထားပါတယ်။
၁။ ရည်မှန်းချက်ထားပါ – ဘယ်ဝိတ်လောက် ဘယ်အချိန်မှာကျချင်သလဲဆိုတာ
၂။ ရေနွေးကြမ်းသောက်ပါ – လေ့လာမှုတွေအရ ရေနွေးကြမ်း သောက်တဲ့သူတွေက မသောက်တဲ့သူတွေထက် အဆီနည်းပါတယ်
၃။ ငရုတ်သီးမှုန့်စားပါ – လေ့လာမှုများအရ ငရုတ်သီးစပ်တာက အဆီကို ချေဖြတ်ပေးပါတယ်။
၄။ သန့်စင်ပြီး ကြာရှည်ခံအောင်လုပ်ထားသော ကစီဓာတ် (ဆန်၊ပြောင်း၊အာလူး) များရှောင်ပါ – ဆေးဖြန်း၊ ပေါလစ်တင်ထားသော ဆန်ဖြူထက် သဘာဝ ဆန်လုံးညိုက လူအတွက်ပိုအဟာရဖြစ်စေပါတယ်။
၅။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ – ကယ်လိုရီ နည်း နည်း နဲ့ ဗုိုက်ဝစေမှာပါ။
၆။ အသီးအနှံများများစားပါ – အသီးစားလို့ ဝိတ်တက်တာမရှိပါ။
၇။ အလေးမပါ – အလွန်လေးတာမရင် ကြွက်သားတက်ပြီး ကယ်လိုရီများစွာလောင်ကြွမ်းစေမှာပါ။
၈။ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုနှင့် တစ်ခုကြားနားချိန် လျှော့ပါ – ပိုမိုထိရောက်မှုရှိပြီး အမောပိုခံလာနိုင်မှာပါ။
၉ ။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်လျှင် အားသွန်ခွန်စိုက်လုပ်ပါ – ဖြေးဖြေးကြာကြာလုပ်တာထက် ပြင်းပြင်း မြန်မြန်လုပ်တာက ပိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
၁၀။ အသားများများစားပါ – အသားဓာတ် က အသားတက်စေပြီး ထမင်းကဲ့သို့ ကစီဓာတ်က အဆီတက်စေပါတယ်။
၁၁။ အသားကို နေ့စဉ် အကြိမ်များစွာစားပါ – တနေ့ သုံးခါ အဝစားတာထက် နည်းနည်းစီ တစ်နေ့လုံးစားတာ ပိုကောင်းပါတယ်။
၁၂။ ငါးကြီးဆီ စားပါ – အဆီကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဓာတ်ကို ပုံမှန် အစားမှမရနို်င်တဲ့အတွက် ငါးကြီးဆီ ကိုတစ်နေ့တစ်လုံးစားသင့်ပါတယ်။
၁၃။ တစ်ကိုယ်လုံး လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ – လက်၊ခြေ၊ ခါး၊ ခေါင်း . . အကုန်လုပ်ပါ။
၁၄။ အလုပ်လုပ်သလောက် ထမင်းစားပါ – ထမင်းကို လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ့် ရက်မှာများများစားပြီး
၁၅။ အသီးအရွက်စစားပါ – ထမင်းစားခါနီး အသီးအရွက်စစား တော့ ဝစေတဲ့ ထမင်းသိပ်မဝင်တော့ပါ။
၁၆။ အမျှင်ဓာတ်များများစားပါ – အမျှင်များဟာ ဖော့လုို ရေစုပ်ထားတဲ့ အတွက် လူကို ဗိုက်တင်းနေစေပါတယ်။
၁၇။ ရေသောက်ပါ – ထမင်းမစားခင် ရေနှစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်တော့ ထမင်းသိပ်မဝတော့ပါ။
၁၈။ အသီးအရွက်ထဲတွင် ပဲထည့်ပေးပါ – အမျှင်၊ အသားဓာတ်နဲ့ ကစီ ဓာတ်အားလုံးကို တစ်မျိုးတည်းနဲ့ရရှိစေမှာပါ။
၁၉ ။ နေ့စဉ် ထမင်း တစ်နပ် အစား အသီးအရွက် နှင့် အသားစားပါ – ဝစေတဲ့ ကစီဓာတ်ကို လျော့ကျစေမယ့်အကောင်းဆုံးနည်းပါ။
၂၀။ အစားမှတ်တမ်းထားပါ – ကိုယ်စားတော့မယ့်အစားသောက် ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါ။ ကုိုယ်ဘာစားလဲ ကိုယ်သိတော့ လျှော့သင့်တာ လျှော့လို့ရပါတယ်။
၂၁။ ချင့်ချိန်စားပါ – အဝစားတွေ လုံးဝရှောင်ပါ။ တန်အောင်စားလို့ကတော့ လူ ဝလာတာနဲ့ပဲ တန်သွားပါလိမ့်မယ်။
၂၂။ ကယ်လိုရီ မပါသော အရည်သောက်ပါ – Coke, Pepsi အချိုရည်မျိုးစုံကို ရှောင်သင့်ပါတယ်။ ရေနွေးကြမ်းနဲ့ ရေကိုသာသောက်ပါ။ ကျန်းမာရေးအတွက်လဲကောင်းပါတယ်။
၂၃။ ပောင်ချိန် နေ့တိုင်ချိန်ပါ – နေ့စဉ် ကိုယ် ဘယ်လောက်ဝတယ် ပိန်တယ် သတိပေးနေတဲ့အတွက် အသိတရားရှိရှိနဲ့ အစာစားတဲ့အခါ သတိထားမိမှာပါ။
၂၄။ ကြက်ဥစားပါ – အနှစ် အကာ အကုန်လုံး မနက်တိုင်းစားပေးလျှင် နေ့လည်စာ အများကြီးစားဖြစ်မှာမဟုတ်တဲ့ အပြင် ကြက်ဥမှာ ကောင်းတဲ့ ကိုလက်စထရောဓာတ်တွေပါနေပါတယ်။ မှတ်ချက်။။။ ကိုလက်စတော တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ပါ
၂၅။ မနက်စာ စားပါ – ကြက်ဥမွှေကြော်၊ ကြက်ဥပြုတ်၊ဒိန်ချဉ် ၊ အသီး စတာတွေစားပေးပါ။ ထမင်း၊ ခောက်ဆွဲ နဲ့ ဆီများတာတွေ လုံးဝ တွေရှောင်ပါ။
၂၆။ မွန်းမတည့်မီ အစားကောင်းကောက်စားပါ – လူအများအပြားက မနက် ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီထိ ပဲအလုပ်လုပ်ကြတဲ့ အတွက် လုိုအပ်တဲ့အားအင်တွေ ဖြည့်ဖို့အတွက် မနက်စာ နဲ့ နေ့လည်စာ ကိုကောင်းကောင်း စားပေးသင့်ပြီး ညနေစာ ကို နည်းနည်းပဲစားပေးပါ။ မွန်းတည့်နောက်ပိုင်းစားသမျှက အဆီဖြစ်ဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများနေပါတယ်။
၂၇။ သတိထားပြီး မတ်မတ်နေပေးပါ – ထို်င်နေတာဖြစ်ဖြစ် ထနေတာဖြစ်ဖြစ် မတ်မတ် နေတာက အားစိုက်ထုတ်ပေးရသောကြောင့် အ ဆီချေဖျက်နိုင်ပါတယ်။ အညောင်းပြေတဲ့အပြင် လူကိုလည်းပိုမို လန်းဆန်းလာစေမှားပါ။
၂၈။ လှေကားသုံးပါ – ဓာတ်လှေကားမသုံးပါနှင့်။ သွားရင်းလာ ၇င်း လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရသလိုဖြစ်ပါတယ်။
၂၉ ။ စွမ်းအင်နည်း သောအစာ စားပါ – အသီး၊ အရွက် များကို များစွာစားသုံးပေးခြင်းအားဖြင့် အခြားဝစေမည့် အစာများကို လျှော့စားမိလိမ့်မည်။
၃၀။ ဗိုက်စာနေချိန် ဈေးမသွားပါနှင့် – ဗိုက်စာစာ နဲ့ ဝမယ့် အစာတွေချည်းဝယ်မိပါလိမ့်မယ်။
၃၁။ အရံဟင်းကို ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပြုတ် စားပါ – ကြော် အချက်မှာပါတဲ့ ဆီကိုရှောင်နိုင်သလောက်ရှောင်ပါ။
၃၂။ ဆီကြော် ဆီချက် ကို ရှောင်ပါ – မြန်မာပြည်မှာတော့ ရှောင်ရန်မလွယ်တဲ့အတွက် ဆီနည်းတာ ကိုရွေးစားပါ။ ဒါမှမရရင် ဆီစစ်စားပါ။ အနှစ်တွေသိပ်မဆမ်းမိပါစေနဲ့။
၃၃။ အကင်ကို ဆီလျှော့ကင် ပါ – အကင်ဆို်င်တွေတော်တော်များများ မှာ ဆီသုတ်ကင်နေကြတာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကင်ရင် အရသာ စပ်ထားတဲ့ အရည်နဲ့ သုပ်ကင်လို့ရပါသည်။
၃၄။ အသုပ်ကို ဆီလျှော့ပါ – ဆီရွဲရွဲ သုတ်တာ ကပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ပါတယ်ဆိုရုံလောက်ပဲဟု ပြောမှရပါမယ် ။
၃၅။ လက်ဖက်ရည် ပေါ့ကျ သောက်ပါ – ချိုတာ ဆိမ့်တာ က လူကို လှိမ့်ပိန့် ပြီး ဝစေမှာပါ။ ကော်ဖီဆို သကြားနည်းနည်းနဲ့ ပလိန်းပဲသောက်ပါ။
၃၆။ ခရီးသွား ရင် ကိုယ့်အထုတ်ကို်ယ်မပါ – ဘီးပါသော အိတ်ဖြစ်နေပါစေ၊ အားစိုက်မခြင်းအားဖြင့် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရာကျပါတယ်။
၃၇။ ကွေကာ အုပ်ကို ပလိန်း သောက်ပါ – သကြားနဲ့ နို့ကို နည်းနိုင်သမျှနည်းပါ။ ကွေကာအုပ်က ဗိုက်ပြည့်စေတဲ့အပြင် အဟာရဓာတ်မျိုးစုံပါဝင်ပါတယ်။
၃၈။ အမြဲ ရီပါ – တစ်ခါ ရီရင် အသက်တစ်ရက် ပို ရှည်တယ်တဲ့။ အားအင်လည်းသုံးရတဲ့အတွက် အဆီကျစေပါတယ်။
၃၉ ။ အညိမ်မထိုင်ပါနဲ့ – အမြဲလှုပ်နေပေးပါ။ ညောင်းပြေစေတဲ့အပြင် လှုပ်ရှားမှုနည်းနည်းက များလာရင် အဆီပါကျစေပါတယ်။
၄၀။ အချိုမတဲပါနဲ့ – စနွင်းမကင်းတို့ ကိတ်တို့ပေါ့။ အသီးပွဲကတော့ အကုန်ဆွဲပြစ်လိုက်။
၄၁။ တစ်ပွဲထဲကို ခွဲမျှစားပါ – ဆီချက်တို့ ကြေးအိုးတို့ဆို တစ်ပွဲဆိုရင်ပဲ နှစ်ယောက်လောက် အသာလေးစားလို့ရတယ်။ အရင်မှာနည်းနည်း ပဲမှာ ပြီး လိုမှထပ်မှာပါ။
၄၂။ အစားအမြဲ ချန်ထားပါ – ချိန်ကိုက်စားပြီး ပိုနေရင် ချန်သာထားလိုက်ပါ။ အတင်း ကုန်အောင်မစားပါနဲ့။ စစ်တိုက်နေတာမဟုတ်တဲ့ အတွက် ဒီတစ်နပ်က နောက်ဆုံး မဟုတ်၊ အစားကို နောက်လဲ အလွယ်တကူ ဝယ်လို့ရနေတာပဲ။ ဒီစာကို ဖတ်နေပြီ ဆိုကတည်း က အင်တာနက်သုံးနေတဲ့ ငတ်နေတဲ့သူမဟုတ်တော့ဘူး။ အစားကိုနှမျောနေရင် စိတ်ဆင်းရဲတာက ခဏဆိုမေ့ပြီ၊ ဝလာတဲ့အခါ ခဏနဲ့ ပြန်ပိန်တာမဟုတ်တော့ တောက်လျှောက်စိတ်ဆင်းရဲရမယ်။
၄၃။ အလှုတွေ ပါတီတွေသွားရင် အစာ နားသိပ်မရပ်နေပါနဲ့ – အလှုဆိုရင် စားစရာရှိတာစာ ပြီး တစ်နေရာမှာ စကားရပ်ပြောချင်ပြောပါ။ ပါတီဆိုရင် အစာ ထားတဲ့နေရာတဲ့ ကပ်မနေပါနဲ့။ လူစိတ်က အပြင်းပြေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်မနေအောင်ဖြစ်ဖြစ် တွေ့ရာကောက်စားနေတက်ပါတယ်။
၄၄။ ကလေးတွေ အကျန်မစားပါနဲ့ – လူတွေက လေးတွေရလာရင်ဝလာတဲ့ အဓိကအကြောင်းပါ။ ကလေးတွေ စားဖို့ ချက်တယ်၊ စားသောက်ဆိုင်မှာ ဆို်မှာတယ်၊ ပြီးတော့ ကလေးကမစားတော့ ကိုယ်ကနှမျောပြီး အကုန်ကြိတ်ပြစ်ကေား
၄၅။ အာလူးကြော်၊ ပုဇွန်မုန့်၊ တွေ မဝယ်ပါနဲ့ – ကိုယ်ကပြင်းပြင်းနဲ့ ဝါးတက်တဲ့ဟာတွေပါ။ အဟာရမဖြစ်တဲ့ အပြင် ဗိုက်လည်းမဝပါ။ ဝိတ်တက် ပြီး ကြာရှည်ခံ ဓာဓုတွေကြောင့်ေ၇ာဂါပါရလာမည်း။
၄၆။ ခွေးမွေးထား ရင် ခွေးနှင့်လမ်းထွက်လျှောက်ပါ – ခွေးကော လူကော လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ရပါတယ်။
၄၇။ ခွေးမရှိရင် မနက်စောစော ထလမ်းလျှောက်ပါ – မြို့တုိုင်းမှာ လမ်းလျှောက် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့ အဖွဲတွေရှိတဲ့အတွက် အပေါင်းအသင်းပါ တိုးပါမယ်။ ရန်ကုန်မှာဆို ကန်ဘောင်တို့ ရင်ပြင်ရှေ့တို့မှာ များပါတယ်။
၄၈။ ပန်းကန် အသေးများကိုသုံးပါ – ပိုမထည့်မိ တော့ လိုသလောက်နည်းနည်းပဲ စားမိပါတယ်။
၄၉ ။ အဝစားများရှောင်ပါ – ထပ်ရှင်းစရာ လိုသေးလို့လား ။
၅၀။ ဖြည်းဖြည်းစား – လေ့လာမှုအရ လူတွေရဲ့ ဗိုက်ဟာ အစာဝပြီး မိနစ် ၂၀ လောက်မှ ဦးနှောက်ကို သတင်းပို့တယ်။ မြန်မြန်စား ရင် ဝင်သေးတယ်ဆိုပြီး တအားစားမိလိမ့်မယ်။
၅၁။ တစ်နေ့ နဲနဲ လျှော့စား – မနေ့ကစားတာ ထက် ဒီနေ့ လျှော့လျှော့စား။ အစာအိမ်က အကျင့်လုပ်ပေးရတယ်။ ချက်ချင်းအများကြီးလျှော့စားလို့မရဘူး။ တဖြည်းဖြည်းလုပ်ယူရတယ်။
၅၂။ အများကြီးမဝယ်နဲ့ – ရှိနေရင် စားဖြစ်နေလိမ့်မယ်။
၅၃။ ကြိုတင် စီစဉ် – စီစဉ် ရန် ရှုံးနိမ့် မှု က ရှုံးနိမ့် ဖို့ စီစဉ်တာပါ။
၅၄။ တစ်ရက်ကို လမ်း အလှမ်း တစ်သောင်းလျှောက်ပါ – ခြေလှမ်းမှတ်တဲ့စက် Pedometer ဝယ်လိုက်ရင် လုိုက်တွက်စရာမလိုပါ။ အားကစား နာ ရီတွေမှာ ဒီနည်းပညာ ပါတက်ပါတယ်။
၅၅။ လမ်းလျှောက်လို့ ရောက်တဲ့ ခရီးကားမစီးပါနဲ့ – အိမ်ခြံနဲ့ နေတဲ့လူတွေ အလုပ်သွား ရင် ခပ်လှမ်းလှမ်းမှာ ကားရပ်ပြီး လမ်းလျှောက်သွားပါ။ ဘတ်ကားစီးတဲ့သူတွေ အလုပ်ပြန်ရင် တစ်မှတ်တိုင် နှစ်မှတ်တိုင်ကြိုဆင်းပြီး လမ်းလျှောက်ပါ။
၅၆။ ကျန်းမာတဲ့ အစာ များဆောင်ထားပါ – သစ်ဥ သစ်ဖု တွေ၊ အသီးတွေ ကို စာတဲ့အချိန်ထုတ်စားလို့ရအောင်ပါ။
၅၇။ ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပါ – ဘယ်လောက်တိုးတက်လာပြီ လဲသိအောင်ပါ။ ယောက်ျားလေးတွေ က ဝိတ်မကျ ပဲ အဆီကျ အသားတက် တာ ကခပ်များများ။ အသားနဲ့ ကြွက်သားတက်လာ ပြီး အဆီကျသွားရင်တောင် ပေါင်ချိန်က အတူတူဖြစ်နေမှာပါ။ ဒီတော့ ဓာတ်ပုံရိုက် မှတ်တမ်းတင်ပြီး ယခုပုံနဲ့ ယှဉ်ကြည့်ပါ။
၅၈။ သူငယ်ချင်း အသစ်ထားပါ – လက်ရှိဘော်ဒါတွေက စားသောက်ပျော်ပါးနေတက်တဲ့ လူတွေဆိုရင် ကျန်းမာရေးလိုက်စားတဲ့ ဘော်ဒါတွေနဲ့ တွဲကြည့်ပါ။ သောက်စားပျော်ပါးနေရင်တော့ ဝိတ်ကပျော်ပျော်ကြီး တက်လာမှာပါ။
၅၉ ။ အားမနာပါနဲ့ – ခေါ်လို့ လိုက်ပြီး ကျွေးတိုင်းစားနေလို့ကတော့ ဝပြီးရင်းဝနေမှာပါ။ မစားဘူးဟုငြင်းတက်အောင်ကြိုးစားပါ။ အားနာတက်ရင် အစာအိမ်နာနေတယ်သာပြောလိုက်၊ ဘယ်သူကမှ အတင်းမကျွေး အတင်းမတိုက်တော့ဘူး။ ပြီးတော့မှ သွားမထိမိစေနဲ့ လူလိမ်ဖြစ်သွားမယ်.
၆၀။ ငုတ်မိသဲတိုင် တက်နို်င်ဖြားရောက် – တို့စိတို့စိ မလုပ်ပါနဲ့။ ဝိတ်ချမယ်ဆုို တစ်စုိုက်မတ်မတ်လုပ်။ စားလိုက် ဝိတ်ချလိုက် ပြန်စား လိုက်လုပ် လို့ကတော့ မုန့်လုံးစက္ကူကပ်နေတာပဲဖြစ်မှာပါ။
၆၁။ နိုးတာနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ် ပြီးရေချိုးပါ – အလုပ်ပင်ပန်းလို့ မလုပ်ဖြစ်တာတို့ ဘာတို့ အကြောင်းပြချက်ပေးစရာမရှိတော့ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းကြောင့် စားဝင် အိပ်ပျော်စေပြီး တစ်နေကုန်လည်းလန်းဆန်းနေစေမှာပါ။
မိန်းကလေးတိုင်း တောင့်တပြီး … ယောက်ျားလေးတိုင်း အားကျစေဖို့ …
ဝိတျကစြမေယျ့ နညျးလမျး ၆၁ နညျး
ငယျငယျတုနျးက တော့ နတေို့ငျး စားပိုးနငျ့အောငျ စားနတောတောငျ တျောတျောနဲ့ဝမလာတာ၊ ခုအသကျလေးနဲနဲ ရလာတာနဲ့ အစားအသောကျပုံမှနျ ပဲစားသျောလညျး ဝိတျမနဲ တကျလာနတော ၂၅ ကြျောကြျောကလူတျောတျောမြားမြား ကွုံတှဖေူ့းမှာပါ။ ဝိတျဘာကွောငျ့တကျလာရတာလဲ။ အစားအသောကျကွောငျ့လား၊ အနအေထိုငျကွောငျ့လား။ အဖွကေ နှဈခုစလုံးပါ။ ငယျငယျတုနျးက အမွဲသှားလာလှုပျရှားနရေတော့ ဘယျလောကျစားစား သိပျမဝလာပမေယျ့ အခုလုပျငနျးခှငျထဲဝငျလာရတော့ ထိုငျနရေတာလဲမြား လာသလို လှုပျရှားသှားလာရတာ နညျးလာတဲ့ အတှကျ အဆီတှေ တကျ ဝိတျတှတေကျလာတာပါ။ အရှငျးဆုံး ပွောရရငျ ကိုယျရဲ့ ခန်တာကုိုယျ က ကိုယျစားတဲ့ အစားအစာ ရဲ့ ရလဒျပါ။ မစားပဲနဲ့တော့ဝ လာစရာအကွောငျးကိုမရှိပါ။ ငယျငယျတုနျးက စားသမြှ ကုို လှုပျရှားသှားလာ နတောကွောငျ့ အားအငျအဖွဈပွောငျးလဲသှားတာကွောငျ့ ဝရနျခကျခဲပါတယျ။ အသကျကွီးလာတာနဲ့ အမြှ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ လှုပျရှားမှုနညျးလာ ပွီး အစားအသောကျကပုံမှနျဖွဈနကော စားသမြှက စှမျးအငျအဖွဈအသုံးမပွုဖွဈပဲ ကိုယျခန်တာက အဆီအနနှေငျ့ သိုလှောငျထားသောကွောငျ့ဝလာတာပါ။ ဝနတောကို နခေ့ငျြးညခငျြး ပိနျအောငျလုပျလို့မရနိုငျပါ။ ဝစတေဲ့ အကငျြ့ကို နညျးနညျးစီဖြောကျ ကာ အခြိနျနညျးနညျးပေးကာမှ ဝိတျကနျြိုငျမှာပါ။ အောကျမှာတော့လူကို အလှယျတကူဝိတျကစြမေယျ့ အခကျြ ၆၁ ခကျြကိုဖျောပွထားပါတယျ။
၁။ ရညျမှနျးခကျြထားပါ – ဘယျဝိတျလောကျ ဘယျအခြိနျမှာကခြငျြသလဲဆိုတာ
၂။ ရနှေေးကွမျးသောကျပါ – လလေ့ာမှုတှအေရ ရနှေေးကွမျး သောကျတဲ့သူတှကေ မသောကျတဲ့သူတှထေကျ အဆီနညျးပါတယျ
၃။ ငရုတျသီးမှုနျ့စားပါ – လလေ့ာမှုမြားအရ ငရုတျသီးစပျတာက အဆီကို ခဖြွေတျပေးပါတယျ။
၄။ သနျ့စငျပွီး ကွာရှညျခံအောငျလုပျထားသော ကစီဓာတျ (ဆနျ၊ပွောငျး၊အာလူး) မြားရှောငျပါ – ဆေးဖွနျး၊ ပေါလဈတငျထားသော ဆနျဖွူထကျ သဘာဝ ဆနျလုံးညိုက လူအတှကျပိုအဟာရဖွဈစပေါတယျ။
၅။ ဟငျးသီးဟငျးရှကျမြားမြားစားပါ – ကယျလိုရီ နညျး နညျး နဲ့ ဗုိုကျဝစမှောပါ။
၆။ အသီးအနှံမြားမြားစားပါ – အသီးစားလို့ ဝိတျတကျတာမရှိပါ။
၇။ အလေးမပါ – အလှနျလေးတာမရငျ ကွှကျသားတကျပွီး ကယျလိုရီမြားစှာလောငျကွှမျးစမှောပါ။
၈။ လကေ့ငျြ့ခနျးတဈခုနှငျ့ တဈခုကွားနားခြိနျ လြှော့ပါ – ပိုမိုထိရောကျမှုရှိပွီး အမောပိုခံလာနိုငျမှာပါ။
၉ ။ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျလြှငျ အားသှနျခှနျစိုကျလုပျပါ – ဖွေးဖွေးကွာကွာလုပျတာထကျ ပွငျးပွငျး မွနျမွနျလုပျတာက ပိုအကြိုးသကျရောကျမှုရှိပါတယျ။
၁၀။ အသားမြားမြားစားပါ – အသားဓာတျ က အသားတကျစပွေီး ထမငျးကဲ့သို့ ကစီဓာတျက အဆီတကျစပေါတယျ။
၁၁။ အသားကို နစေ့ဉျ အကွိမျမြားစှာစားပါ – တနေ့ သုံးခါ အဝစားတာထကျ နညျးနညျးစီ တဈနလေုံ့းစားတာ ပိုကောငျးပါတယျ။
၁၂။ ငါးကွီးဆီ စားပါ – အဆီကို တိုကျဖကျြပေးတဲ့ အိုမီဂါ ၃ ဓာတျကို ပုံမှနျ အစားမှမရနျိုငျတဲ့အတှကျ ငါးကွီးဆီ ကိုတဈနတေ့ဈလုံးစားသငျ့ပါတယျ။
၁၃။ တဈကိုယျလုံး လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျပါ – လကျ၊ခွေ၊ ခါး၊ ခေါငျး . . အကုနျလုပျပါ။
၁၄။ အလုပျလုပျသလောကျ ထမငျးစားပါ – ထမငျးကို လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျမယျ့ ရကျမှာမြားမြားစားပွီး
၁၅။ အသီးအရှကျစစားပါ – ထမငျးစားခါနီး အသီးအရှကျစစား တော့ ဝစတေဲ့ ထမငျးသိပျမဝငျတော့ပါ။
၁၆။ အမြှငျဓာတျမြားမြားစားပါ – အမြှငျမြားဟာ ဖော့လုို ရစေုပျထားတဲ့ အတှကျ လူကို ဗိုကျတငျးနစေပေါတယျ။
၁၇။ ရသေောကျပါ – ထမငျးမစားခငျ ရနှေဈခှကျလောကျသောကျလိုကျတော့ ထမငျးသိပျမဝတော့ပါ။
၁၈။ အသီးအရှကျထဲတှငျ ပဲထညျ့ပေးပါ – အမြှငျ၊ အသားဓာတျနဲ့ ကစီ ဓာတျအားလုံးကို တဈမြိုးတညျးနဲ့ရရှိစမှောပါ။
၁၉ ။ နစေ့ဉျ ထမငျး တဈနပျ အစား အသီးအရှကျ နှငျ့ အသားစားပါ – ဝစတေဲ့ ကစီဓာတျကို လြော့ကစြမေယျ့အကောငျးဆုံးနညျးပါ။
၂၀။ အစားမှတျတမျးထားပါ – ကိုယျစားတော့မယျ့အစားသောကျ ကို ဓာတျပုံရိုကျထားပါ။ ကုိုယျဘာစားလဲ ကိုယျသိတော့ လြှော့သငျ့တာ လြှော့လို့ရပါတယျ။
၂၁။ ခငျြ့ခြိနျစားပါ – အဝစားတှေ လုံးဝရှောငျပါ။ တနျအောငျစားလို့ကတော့ လူ ဝလာတာနဲ့ပဲ တနျသှားပါလိမျ့မယျ။
၂၂။ ကယျလိုရီ မပါသော အရညျသောကျပါ – Coke, Pepsi အခြိုရညျမြိုးစုံကို ရှောငျသငျ့ပါတယျ။ ရနှေေးကွမျးနဲ့ ရကေိုသာသောကျပါ။ ကနျြးမာရေးအတှကျလဲကောငျးပါတယျ။
၂၃။ ပောငျခြိနျ နတေို့ငျခြိနျပါ – နစေ့ဉျ ကိုယျ ဘယျလောကျဝတယျ ပိနျတယျ သတိပေးနတေဲ့အတှကျ အသိတရားရှိရှိနဲ့ အစာစားတဲ့အခါ သတိထားမိမှာပါ။
၂၄။ ကွကျဥစားပါ – အနှဈ အကာ အကုနျလုံး မနကျတိုငျးစားပေးလြှငျ နလေ့ညျစာ အမြားကွီးစားဖွဈမှာမဟုတျတဲ့ အပွငျ ကွကျဥမှာ ကောငျးတဲ့ ကိုလကျစထရောဓာတျတှပေါနပေါတယျ။ မှတျခကျြ။။။ ကိုလကျစတော တိုငျးကောငျးတာမဟုတျပါ
၂၅။ မနကျစာ စားပါ – ကွကျဥမှကွေျော၊ ကွကျဥပွုတျ၊ဒိနျခဉျြ ၊ အသီး စတာတှစေားပေးပါ။ ထမငျး၊ ခောကျဆှဲ နဲ့ ဆီမြားတာတှေ လုံးဝ တှရှေောငျပါ။
၂၆။ မှနျးမတညျ့မီ အစားကောငျးကောကျစားပါ – လူအမြားအပွားက မနကျ ၉ နာရီ မှ ညနေ ၅ နာရီထိ ပဲအလုပျလုပျကွတဲ့ အတှကျ လုိုအပျတဲ့အားအငျတှေ ဖွညျ့ဖို့အတှကျ မနကျစာ နဲ့ နလေ့ညျစာ ကိုကောငျးကောငျး စားပေးသငျ့ပွီး ညနစော ကို နညျးနညျးပဲစားပေးပါ။ မှနျးတညျ့နောကျပိုငျးစားသမြှက အဆီဖွဈဖို့ ရာခိုငျနှုနျးမြားနပေါတယျ။
၂၇။ သတိထားပွီး မတျမတျနပေေးပါ – ထျိုငျနတောဖွဈဖွဈ ထနတောဖွဈဖွဈ မတျမတျ နတောက အားစိုကျထုတျပေးရသောကွောငျ့ အ ဆီခဖြေကျြနိုငျပါတယျ။ အညောငျးပွတေဲ့အပွငျ လူကိုလညျးပိုမို လနျးဆနျးလာစမှေားပါ။
၂၈။ လှကေားသုံးပါ – ဓာတျလှကေားမသုံးပါနှငျ့။ သှားရငျးလာ ရငျး လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရသလိုဖွဈပါတယျ။
၂၉ ။ စှမျးအငျနညျး သောအစာ စားပါ – အသီး၊ အရှကျ မြားကို မြားစှာစားသုံးပေးခွငျးအားဖွငျ့ အခွားဝစမေညျ့ အစာမြားကို လြှော့စားမိလိမျ့မညျ။
၃၀။ ဗိုကျစာနခြေိနျ စြေးမသှားပါနှငျ့ – ဗိုကျစာစာ နဲ့ ဝမယျ့ အစာတှခေညျြးဝယျမိပါလိမျ့မယျ။
၃၁။ အရံဟငျးကို ဟငျးသီးဟငျးရှကျပွုတျ စားပါ – ကွျော အခကျြမှာပါတဲ့ ဆီကိုရှောငျနိုငျသလောကျရှောငျပါ။
၃၂။ ဆီကွျော ဆီခကျြ ကို ရှောငျပါ – မွနျမာပွညျမှာတော့ ရှောငျရနျမလှယျတဲ့အတှကျ ဆီနညျးတာ ကိုရှေးစားပါ။ ဒါမှမရရငျ ဆီစဈစားပါ။ အနှဈတှသေိပျမဆမျးမိပါစနေဲ့။
၃၃။ အကငျကို ဆီလြှော့ကငျ ပါ – အကငျဆျိုငျတှတေျောတျောမြားမြား မှာ ဆီသုတျကငျနကွေတာပါ။ ကိုယျတိုငျကငျရငျ အရသာ စပျထားတဲ့ အရညျနဲ့ သုပျကငျလို့ရပါသညျ။
၃၄။ အသုပျကို ဆီလြှော့ပါ – ဆီရှဲရှဲ သုတျတာ ကပုံမှနျဖွဈနတေဲ့ အတှကျ ပါတယျဆိုရုံလောကျပဲဟု ပွောမှရပါမယျ ။
၃၅။ လကျဖကျရညျ ပေါ့ကြ သောကျပါ – ခြိုတာ ဆိမျ့တာ က လူကို လှိမျ့ပိနျ့ ပွီး ဝစမှောပါ။ ကျောဖီဆို သကွားနညျးနညျးနဲ့ ပလိနျးပဲသောကျပါ။
၃၆။ ခရီးသှား ရငျ ကိုယျ့အထုတျကျိုယျမပါ – ဘီးပါသော အိတျဖွဈနပေါစေ၊ အားစိုကျမခွငျးအားဖွငျ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျရာကပြါတယျ။
၃၇။ ကှကော အုပျကို ပလိနျး သောကျပါ – သကွားနဲ့ နို့ကို နညျးနိုငျသမြှနညျးပါ။ ကှကောအုပျက ဗိုကျပွညျ့စတေဲ့အပွငျ အဟာရဓာတျမြိုးစုံပါဝငျပါတယျ။
၃၈။ အမွဲ ရီပါ – တဈခါ ရီရငျ အသကျတဈရကျ ပို ရှညျတယျတဲ့။ အားအငျလညျးသုံးရတဲ့အတှကျ အဆီကစြပေါတယျ။
၃၉ ။ အညိမျမထိုငျပါနဲ့ – အမွဲလှုပျနပေေးပါ။ ညောငျးပွစေတေဲ့အပွငျ လှုပျရှားမှုနညျးနညျးက မြားလာရငျ အဆီပါကစြပေါတယျ။
၄၀။ အခြိုမတဲပါနဲ့ – စနှငျးမကငျးတို့ ကိတျတို့ပေါ့။ အသီးပှဲကတော့ အကုနျဆှဲပွဈလိုကျ။
၄၁။ တဈပှဲထဲကို ခှဲမြှစားပါ – ဆီခကျြတို့ ကွေးအိုးတို့ဆို တဈပှဲဆိုရငျပဲ နှဈယောကျလောကျ အသာလေးစားလို့ရတယျ။ အရငျမှာနညျးနညျး ပဲမှာ ပွီး လိုမှထပျမှာပါ။
၄၂။ အစားအမွဲ ခနျြထားပါ – ခြိနျကိုကျစားပွီး ပိုနရေငျ ခနျြသာထားလိုကျပါ။ အတငျး ကုနျအောငျမစားပါနဲ့။ စဈတိုကျနတောမဟုတျတဲ့ အတှကျ ဒီတဈနပျက နောကျဆုံး မဟုတျ၊ အစားကို နောကျလဲ အလှယျတကူ ဝယျလို့ရနတောပဲ။ ဒီစာကို ဖတျနပွေီ ဆိုကတညျး က အငျတာနကျသုံးနတေဲ့ ငတျနတေဲ့သူမဟုတျတော့ဘူး။ အစားကိုနှမြောနရေငျ စိတျဆငျးရဲတာက ခဏဆိုမပွေီ့၊ ဝလာတဲ့အခါ ခဏနဲ့ ပွနျပိနျတာမဟုတျတော့ တောကျလြှောကျစိတျဆငျးရဲရမယျ။
၄၃။ အလှုတှေ ပါတီတှသှေားရငျ အစာ နားသိပျမရပျနပေါနဲ့ – အလှုဆိုရငျ စားစရာရှိတာစာ ပွီး တဈနရောမှာ စကားရပျပွောခငျြပွောပါ။ ပါတီဆိုရငျ အစာ ထားတဲ့နရောတဲ့ ကပျမနပေါနဲ့။ လူစိတျက အပွငျးပွပေဲဖွဈဖွဈ၊ အူကွောငျကွောငျ ဖွဈမနအေောငျဖွဈဖွဈ တှရေ့ာကောကျစားနတေကျပါတယျ။
၄၄။ ကလေးတှေ အကနျြမစားပါနဲ့ – လူတှကေ လေးတှရေလာရငျဝလာတဲ့ အဓိကအကွောငျးပါ။ ကလေးတှေ စားဖို့ ခကျြတယျ၊ စားသောကျဆိုငျမှာ ဆျိုမှာတယျ၊ ပွီးတော့ ကလေးကမစားတော့ ကိုယျကနှမြောပွီး အကုနျကွိတျပွဈကေား
၄၅။ အာလူးကွျော၊ ပုဇှနျမုနျ့၊ တှေ မဝယျပါနဲ့ – ကိုယျကပွငျးပွငျးနဲ့ ဝါးတကျတဲ့ဟာတှပေါ။ အဟာရမဖွဈတဲ့ အပွငျ ဗိုကျလညျးမဝပါ။ ဝိတျတကျ ပွီး ကွာရှညျခံ ဓာဓုတှကွေောငျ့ရောဂါပါရလာမညျး။
၄၆။ ခှေးမှေးထား ရငျ ခှေးနှငျ့လမျးထှကျလြှောကျပါ – ခှေးကော လူကော လကေ့ငျြ့ခနျး လုပျရပါတယျ။
၄၇။ ခှေးမရှိရငျ မနကျစောစော ထလမျးလြှောကျပါ – မွို့တုိုငျးမှာ လမျးလြှောကျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျတဲ့ အဖှဲတှရှေိတဲ့အတှကျ အပေါငျးအသငျးပါ တိုးပါမယျ။ ရနျကုနျမှာဆို ကနျဘောငျတို့ ရငျပွငျရှတေို့မှာ မြားပါတယျ။
၄၈။ ပနျးကနျ အသေးမြားကိုသုံးပါ – ပိုမထညျ့မိ တော့ လိုသလောကျနညျးနညျးပဲ စားမိပါတယျ။
၄၉ ။ အဝစားမြားရှောငျပါ – ထပျရှငျးစရာ လိုသေးလို့လား ။
၅၀။ ဖွညျးဖွညျးစား – လလေ့ာမှုအရ လူတှရေဲ့ ဗိုကျဟာ အစာဝပွီး မိနဈ ၂၀ လောကျမှ ဦးနှောကျကို သတငျးပို့တယျ။ မွနျမွနျစား ရငျ ဝငျသေးတယျဆိုပွီး တအားစားမိလိမျ့မယျ။
၅၁။ တဈနေ့ နဲနဲ လြှော့စား – မနကေ့စားတာ ထကျ ဒီနေ့ လြှော့လြှော့စား။ အစာအိမျက အကငျြ့လုပျပေးရတယျ။ ခကျြခငျြးအမြားကွီးလြှော့စားလို့မရဘူး။ တဖွညျးဖွညျးလုပျယူရတယျ။
၅၂။ အမြားကွီးမဝယျနဲ့ – ရှိနရေငျ စားဖွဈနလေိမျ့မယျ။
၅၃။ ကွိုတငျ စီစဉျ – စီစဉျ ရနျ ရှုံးနိမျ့ မှု က ရှုံးနိမျ့ ဖို့ စီစဉျတာပါ။
၅၄။ တဈရကျကို လမျး အလှမျး တဈသောငျးလြှောကျပါ – ခွလှေမျးမှတျတဲ့စကျ Pedometer ဝယျလိုကျရငျ လုိုကျတှကျစရာမလိုပါ။ အားကစား နာ ရီတှမှော ဒီနညျးပညာ ပါတကျပါတယျ။
၅၅။ လမျးလြှောကျလို့ ရောကျတဲ့ ခရီးကားမစီးပါနဲ့ – အိမျခွံနဲ့ နတေဲ့လူတှေ အလုပျသှား ရငျ ခပျလှမျးလှမျးမှာ ကားရပျပွီး လမျးလြှောကျသှားပါ။ ဘတျကားစီးတဲ့သူတှေ အလုပျပွနျရငျ တဈမှတျတိုငျ နှဈမှတျတိုငျကွိုဆငျးပွီး လမျးလြှောကျပါ။
၅၆။ ကနျြးမာတဲ့ အစာ မြားဆောငျထားပါ – သဈဥ သဈဖု တှေ၊ အသီးတှေ ကို စာတဲ့အခြိနျထုတျစားလို့ရအောငျပါ။
၅၇။ ဓာတျပုံရိုကျထားပါ – ဘယျလောကျတိုးတကျလာပွီ လဲသိအောငျပါ။ ယောကျြားလေးတှေ က ဝိတျမကြ ပဲ အဆီကြ အသားတကျ တာ ကခပျမြားမြား။ အသားနဲ့ ကွှကျသားတကျလာ ပွီး အဆီကသြှားရငျတောငျ ပေါငျခြိနျက အတူတူဖွဈနမှောပါ။ ဒီတော့ ဓာတျပုံရိုကျ မှတျတမျးတငျပွီး ယခုပုံနဲ့ ယှဉျကွညျ့ပါ။
၅၈။ သူငယျခငျြး အသဈထားပါ – လကျရှိဘျောဒါတှကေ စားသောကျပြျောပါးနတေကျတဲ့ လူတှဆေိုရငျ ကနျြးမာရေးလိုကျစားတဲ့ ဘျောဒါတှနေဲ့ တှဲကွညျ့ပါ။ သောကျစားပြျောပါးနရေငျတော့ ဝိတျကပြျောပြျောကွီး တကျလာမှာပါ။
၅၉ ။ အားမနာပါနဲ့ – ချေါလို့ လိုကျပွီး ကြှေးတိုငျးစားနလေို့ကတော့ ဝပွီးရငျးဝနမှောပါ။ မစားဘူးဟုငွငျးတကျအောငျကွိုးစားပါ။ အားနာတကျရငျ အစာအိမျနာနတေယျသာပွောလိုကျ၊ ဘယျသူကမှ အတငျးမကြှေး အတငျးမတိုကျတော့ဘူး။ ပွီးတော့မှ သှားမထိမိစနေဲ့ လူလိမျဖွဈသှားမယျ.
၆၀။ ငုတျမိသဲတိုငျ တကျနျိုငျဖွားရောကျ – တို့စိတို့စိ မလုပျပါနဲ့။ ဝိတျခမြယျဆုို တဈစုိုကျမတျမတျလုပျ။ စားလိုကျ ဝိတျခလြိုကျ ပွနျစား လိုကျလုပျ လို့ကတော့ မုနျ့လုံးစက်ကူကပျနတောပဲဖွဈမှာပါ။
၆၁။ နိုးတာနဲ့ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျ ပွီးရခြေိုးပါ – အလုပျပငျပနျးလို့ မလုပျဖွဈတာတို့ ဘာတို့ အကွောငျးပွခကျြပေးစရာမရှိတော့ပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးကွောငျ့ စားဝငျ အိပျပြျောစပွေီး တဈနကေုနျလညျးလနျးဆနျးနစေမှောပါ။
Previous: ယောက်ျားများအတွက် အန္တာရယ် အများဆုံး အစားအစာ
Next: ချက်ချင်း လက်ငင်း လူချစ် လူခင် ပေါအောင်နေထိုင်နည်း ၁၃ နည်း